မြန်မာ၌ ဖြစ်ပွားဆဲ ကိုဗစ်၁၉ ကပ်ဆိုး
၂,၇၄၃,၇၈၃ ၁၅၉,၃၄၇ ၁၃၆,၉၉၂ ၃,၃၄၇
၁ ဇူလိုင် ၂၀၂၁ အရ
2020-03-23 ၂(n.a.) ၀(n.a.)
2020-03-24 ၃(+၁) ၀(n.a.)
2020-03-25 ၃(=) ၀(n.a.)
2020-03-26 ၅(+၂) ၀(n.a.)
2020-03-27 ၈(+၃) ၀(n.a.)
2020-03-28 ၈(=) ၀(n.a.)
​ဟားခါးပြည်သူ့​ဆေးရုံ (ဟားခါး) ၂
C1 ၃၆ ကျား
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ တီးတိန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ၂၁ မတ် ၂၀၂၀ ၂၃ မတ် ၂၀၂၀ (ည ၁၁:၄၅) ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ Green Cardရရှိထားသူ
C2 ၂၆ ကျား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ၂၃ မတ် ၂၀၂၀ ၂၃ မတ် ၂၀၂၀ (ည ၁၁:၄၅) ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C3 ၂၆ ကျား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ အင်းစိန်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ၂၃ မတ် ၂၀၂၀ ၂၅ မတ် ၂၀၂၀ (နံနက် ၁:၀၀)
C4 ၃၃ ကျား
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကန်တော်နဒီဆေးရုံ၊မန္တလေး ကန်တော်နဒီဆေးရုံ၊မန္တလေး ၂၅ မတ် ၂၀၂၀ ၂၇ မတ် ၂၀၂၀ (နံနက် ၁:၄၅) ဧပြီလ၉ရက်နေ့ည (၈:၀၀)တွင် ပြန်လည်သက်သာ​ကြောင်းထုတ်ပြန် မြန်မာပြည်ဖွား
C5 ၆၉ ကျား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ၂၅ မတ် ၂၀၂၀ ၂၇ မတ် ၂၀၂၀ (နံနက် ၁:၄၅) မတ်လ ၃၁ရက်နေ့ နံနက် ၇:၂၅တွင် ကွယ်လွန်
C6 ၂၉ ကျား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ၂၆ မတ် ၂၀၂၀ ၂၈ မတ် ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၂:၁၅) ၂၇ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C7 ၅၈ မ
ဆွစ်ဇာလန် ​နေပြည်​တော် ပထစနယ်​မြေ နေပြည်တော် ခုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံ နေပြည်တော် ခုတင်(၁၀၀၀)ဆေးရုံ ၂၆ မတ် ၂၀၂၀ ၂၈ မတ် ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၂:၁၅) ဧပြီလ ၈ရက်နေ့တွင် ပြန်လည်သက်သာ
C8 ၆၀ မ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ၂၆ မတ် ၂၀၂၀ ၂၈ မတ် ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၂:၁၅) ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C9 ၄၄ ကျား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ပုလဲမြို့သစ်ပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ ၂၆ မတ် ၂၀၂၀ ၂၉ မတ် ၂၀၂၀ (ည ၁၀:၃၀)
C10 ၄၅ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ၂၈ မတ် ၂၀၂၀ ၂၉ မတ် ၂၀၂၀ (ည ၁၀:၃၀)
C11 ၆၆ မ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဟိုတယ်တစ်ခု ၂၈ မတ် ၂၀၂၀ ၃၀ မတ် ၂၀၂၀ (ည ၇:၃၀) ဧပြီလ ၁၉ရက်​နေ့တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C12 ၆၅ ကျား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ၂၈ မတ် ၂၀၂၀ ၃၀ မတ် ၂၀၂၀ (ည ၇:၃၀)
C13 ၆၁ မ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ရန်ကုန်မြို့ရှိဟိုတယ်တစ်ခု ၂၈ မတ် ၂၀၂၀ ၃၀ မတ် ၂၀၂၀ (ည ၇:၃၀) ၃ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C14 ၂၄ ကျား
ရှမ်းပြည်နယ် လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံ ကျောက်မဲပြည်သူ့ဆေးရုံ၊ရှမ်းပြည်နယ် ၂၈ မတ် ၂၀၂၀ ၃၀ မတ် ၂၀၂၀ (ည ၇:၃၀) ​မေလ ၁ရက်​နေ့တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C15 ၄၅ မ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ၃၀ မတ် ၂၀၂၀ ၃၁ မတ် ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ဧပြီလ ၁၉ရက်​နေ့တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C16 ၆၃ မ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ၃၁ မတ် ၂၀၂၀ ၁ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ဧပြီလ ၈ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်
C17 ၄၇ ကျား C15 မရှိ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ၃၁ မတ် ၂၀၂၀ ၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ဧပြီလ ၈ရက် နံနက် (၃:၄၀)တွင် ကွယ်လွန်
C18 ၁၀ ကျား C15 မရှိ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ၃၁ မတ် ၂၀၂၀ ၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ​မေလ ၁ရက်​နေ့တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C19 ၈ မ C15 မရှိ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ၃၁ မတ် ၂၀၂၀ ၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၂၇ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C20 ၁၈ မ C15 မရှိ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံး ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ၃၁ မတ် ၂၀၂၀ ၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၂၇ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C21 ၂၄ မ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းဆေးရုံကြီး ၂၆ မတ် ၂၀၂၀ ၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) မိသားစု
C22 ၅၁ မ C21
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ၅ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀)
C23 ၅၈ မ C1 မရှိ
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ တီးတိန်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန ၂၃ မတ် ၂၀၂၀ ၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) အမေရိကန်နိုင်ငံမှ Green Cardရရှိထားသူ
C24 ၃၂ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး​​ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၃:၀၀) ၂၇ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန် မတ်လ၁၉ရက်တွင် စင်ကာပူမှပြန်​ရောက်
C25 ၅၅ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ရန်ကုန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၃:၀၀) ၂၇ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C26 ၅၆ မ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ရန်ကုန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၃:၀၀) ၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C27 ၂၇ မ မရှိ ​
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ကျိုက်မ​ရောပြည်သူ့​ဆေးရုံ မတ် ၃၀ ၂၀၂၀ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၃:၀၀) ဧပြီ၂၅ရက်​နေ့တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C28 ၆၃ ကျား C8 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ၂၈ မတ် ၂၀၂၀ ၁၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၁၀:၁၅) ၂၀ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C29 ၂၆ ကျား မရှိ
ရှမ်းပြည်နယ် စဝ်စံထွန်းပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၂၈ မတ် ၂၀၂၀ ၁၁ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၂၇ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C30 ၅၈ မ C17 မရှိ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ ပြည်မြို့ ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၁ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၁၁ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C31 ၄၉ မ C1 မရှိ
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ တီးတိန်မြို့နယ်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၁ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀)
C32 ၃၈ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ လှည်းကူးပြည့်သူ့​ဆေးရုံ၊ရန်ကုန်မြို့ ၂၈ မတ် ၂၀၂၀ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၂:၀၀) ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C33 ၂၉ မ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ အင်းစိန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၁၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၂:၀၀) ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C34 ၂၀ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ အင်းစိန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၁၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၂:၀၀) ၁၉ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C35 ၂၄ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ အင်းစိန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၁၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၂:၀၀) ၁၃ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C36 ၃၃ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ အင်းစိန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၁၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၂:၀၀) ၁၈ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C37 ၄၄ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံ အင်းစိန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၁၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၂:၀၀) ၃ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C38 ၇၈ မ မရှိ
C39 ၈၅ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ရန်ကုန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၁၁ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ဧပြီ၁၂ရက်​နေ့ နံနက်တွင်ပင် ကွယ်လွန်
C40 ၆၈ မ C8၊ C28 မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ​မြောက်ဥက္ကလာပပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၁၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၂:၃၀) ၁၆ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C41 ၃၈ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ အင်းစိန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၁၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၂:၃၀) ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C42 ၄၃ မ မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀)
C43 ၄၁ မ မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၂၀ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C44 ၃၂ မ မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၁၄ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C45 ၅၄ ကျား မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၈ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C46 ၄၄ ကျား မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C47 ၅၀ မ မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C48 ၃၁ ကျား မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၁၈ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C49 ၃၅ ကျား မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၁၆ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C50 ၄၁ ကျား မရှိ ​
C51 ၄၉ ကျား မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၄ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C52 ၄၀ မ မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၂၆ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C53 ၃၁ ကျား မရှိ ​
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မ​ကွေးပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး မြို့သစ်မြို့နယ် ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၁၀:၁၅) ၂ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C54 ၇ မ မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၂:၁၅) ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C55 ၄၀ ကျား မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၂:၁၅) ၁၄ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C56 ၃၃ မ မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၂:၁၅) ၁၆ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C57 ၃၉ မ မရှိ ​
C58 ၄၆ မ မရှိ ​
C59 ၂၃ မ မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၂:၁၅) ၂၃ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C60 ၃၉ ကျား မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၂:၁၅) ၃၁ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C61 ၃၈ ကျား မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၂:၁၅)
C62 ၃၀ မ မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၂:၁၅) ၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C63 ၆၅ ကျား မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ​နေအိမ် ၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C64 ၂၃ ကျား C24 မရှိ
ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံပြည်သူ့​ဆေးရုံ ကျိုင်းတုံပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၃၁ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C65 ၅၇ မ C39 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ​စောင့်ကြည့်​ရေး​နေရာတစ်ခု ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၁၅ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C66 ၇၅ မ C39 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ​စောင့်ကြည့်​ရေး​နေရာတစ်ခု ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C67 ၂၇ မ C39 မရှိ
C68 ၃၇ ကျား C39 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ​စောင့်ကြည့်​ရေး​နေရာတစ်ခု ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၂၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C69 ၃၄ ကျား C24 မရှိ
C70 ၃၁ ကျား C24 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ​စောင့်ကြည့်​ရေး​နေရာတစ်ခု ၁၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၂ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C71 ၃၂ မ C8၊C28၊C40 မရှိ
C72 ၂၇ မ C37 မရှိ
C73 ၂၉ မ C35၊C36 မရှိ
C74 ၆၃ မ C1၊C23 မရှိ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး က​လေးမြို့ပြည်သူ့​ဆေးရုံ က​လေးမြို့နယ်ရှိ​နေအိမ် ၂၄ မတ် ၂၀၂၀ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၈ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C75 ၃၅ မ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၂ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန် ​စောင့်ကြည့်လူနာ
C76 ၂၀ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ​စောင့်ကြည့်​ရေး​နေရာတစ်ခု ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၃ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C77 ၃၃ မ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ​စောင့်ကြည့်​ရေး​နေရာတစ်ခု ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၁၆ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C78 ၆၇ ကျား မရှိ
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ တီးတိန်မြို့နယ်ရှိ​နေအိမ် ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၂၉ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C79 ၄၃ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန် ​စောင့်ကြည့်လူနာ
C80 ၂၈ ကျား မရှိ
C81 ၂၈ မ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ရန်ကုန်တိုင်းရှိ ​စောင့်ကြည့်​ရေး​နေရာတစ်ခု ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၈ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C82 ၃၈ မ ထိ​တွေ့မှုမရှိ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကန်တော်နဒီဆေးရုံ၊မန္တလေး မန္တ​လေးမြို့ရှိ ​စောင့်ကြည့်​ရေး​နေရာတစ်ခု ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၁၂ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C83 ၆၃ ကျား ထိ​​တွေ့မှုမရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၁၀:၃၀) ၂၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန် ​စောင့်ကြည့်လူနာ
C84 ၄၀ ကျား မရှိ
C85 ၇၇ ကျား မရှိ
C86 ၇၈ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​အင်းစိန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၈:၀၀) ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက် (၂:၅၅)တွင်ကွယ်လွန်
C87 ၆၂ ကျား မရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ရန်ကုန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၁၅ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၈:၀၀) ၂၀ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C88 ၄၇ မ ရှိ မရှိ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး က​လေးမြို့ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၁၇ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၈:၀၀) ၁၈ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C89 ၅၀ ကျား ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​​မြောက်ဥက္ကလာပ​ဆေးရုံကြီး ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက် (၈:၀၀) ၃၁ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C90 ၅၇ မ ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ ​​မြောက်ဥက္ကလာပ​ဆေးရုံကြီး ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက် (၈:၀၀) ​မေလ ၁ရက်​နေ့တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C91 ၆၀ ကျား ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​​မြောက်ဥက္ကလာပ​ဆေးရုံကြီး ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက် (၈:၀၀)
C92 ၂၄ ကျား ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်အ​ရှေ့ပိုင်း​ဆေးရုံကြီး ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက် (၈:၀၀) ၁၄ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C93 ၃၆ ကျား ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်အ​ရှေ့ပိုင်း​ဆေးရုံကြီး ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက် (၈:၀၀)
C94 ၃၉ ကျား ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်ဆေးရုံကြီး ၁၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက် (၈:၀၀) ၃ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C95 ၁နှစ် ၆လ ကျား C39၊C67၊C68 မရှိ ​
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၈:၀၀) ၁၄ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန် C39၏​မြေး၊C67၊68တို့၏သား
C96 ၄၃ ကျား ရှိ မရှိ
ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံပြည်သူ့​ဆေးရုံ ကျိုင်းတုံပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၈:၀၀) ၆ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C97 ၄၉ မ ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၉:၀၀) ၁၁ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C98 ၂၀ မ ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၁၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၉:၀၀) ၁၀ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C99 ၃၈ ကျား ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက် (၇:၀၀) ၄ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C100 ၄၄ ကျား ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက် (၇:၀၀)
C101 ၆၀ ကျား ရှိ မရှိ
C102 ၄၂ ကျား ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက် (၇:၀၀) ၁၂ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C103 ၃၁ ကျား ရှိ မရှိ
C104 ၃၅ မ ရှိ မရှိ
C105 ၄၄ မ ရှိ မရှိ
C106 ၂၆ ကျား ရှိ မရှိ
C107 ၅၄ မ ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက် (၇:၀၀) ၂၄ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C108 ၈၅ မ ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ အင်းစိန်​ဆေးရုံ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၈:၀၀) ၈ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C109 ၃၇ ကျား မရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ရန်ကုန်အ​နောက်ပိုင်းဆေးရုံ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၁၁:၁၅) ၄ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C110 ၆၃ ကျား ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ရန်ကုန်အ​ရှေ့ပိုင်းဆေးရုံ ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၁၁:၁၅) ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက် (၁၁:၁၅)တွင် ကွယ်လွန်
C111 ၅၄ မ ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ၁၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၁၁:၁၅) ၃ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C112 ၂၉ မ ရှိ မရှိ
ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၈:၀၀) ၂၂ ​​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C113 ၆၅ ကျား ရှိ မရှိ
ချင်းပြည်နယ် တီးတိန်မြို့နယ်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၈:၀၀)
C114 ၅၂ ကျား ရှိ မရှိ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး က​လေးမြို့ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၈:၀၀) ၁၈ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C115 ၁၉ ကျား ရှိ မရှိ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး က​လေးမြို့ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၈:၀၀) ၁၅ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C116 ၁၇ ကျား ရှိ မရှိ
C117 ၁၀ မ ရှိ မရှိ
C118 ၃၁ မ C17၊C30 မရှိ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့ ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၁၁:၀၀) ၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C119 ၃၁ မ C17၊C30 မရှိ
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်မြို့ ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၂၀ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည (၁၁:၀၀) ၂၃ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C120 ၂၁ မ မရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ရန်ကုန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည(၈:၀၀) ၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C121 ၂၁ မ မရှိ မရှိ
ရှမ်းပြည်နယ် ​စဝ်စံထွန်း​ဆေးရုံကြီး၊​တောင်ကြီးမြို့ ၂၁ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည(၈:၀၀) ၁၆ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C122 ၂၈ ကျား C84 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည(၈:၀၀) ၁၉ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C123 ၁၈ မ C108 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၂၂ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည(၈:၀၀)
C124 ၄၅ ကျား C89 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက်(၇:၀၀)
C125 ၁၈ ကျား C110 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက်(၇:၀၀) ၂၀ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C126 ၄၇ ကျား C87 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက်(၇:၀၀) ၈ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C127 ၂၄ မ C94 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ နံနက်(၇:၀၀) ၁၄ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C128 ၅၄ ကျား ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ ည(၈:၀၀)
C129 ၃၁ မ ရှိ မရှိ
C130 ၆၅ မ ရှိ မရှိ
C131 ၂၈ မ ရှိ မရှိ
C132 ၈၀ ကျား မရှိ မရှိ
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကန်တော်နဒီဆေးရုံ၊မန္တလေး မန္တ​လေးပြည်သူ့​ဆေးရုံကြီး ၂၃ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C133 ၄၅ ကျား C79
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ရန်ကုန်မြို့ရှိဟိုတယ်တစ်ခု ၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၉:၀၀)
C134 ၃၅ ကျား C79၊C92၊C93
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ရန်ကုန်မြို့ရှိဟိုတယ်တစ်ခု ၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၉:၀၀) ၂၅ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C135 ၃၅ မ C79၊C93
C136 ၂၅ ကျား C92
C137 ၃၁ မ C79၊C93
C138 ၅၃ ကျား C93
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ရန်ကုန်မြို့ရှိဟိုတယ်တစ်ခု ၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၉:၀၀) ၂၉ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C139 ၂၆ မ C79၊C93
C140 ၃၉ မ C24၊C62 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀)
C141 ၂၈ ကျား ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၁၀ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C142 ၃၅ ကျား C79၊C93 မရှိ
C143 ၈၇ မ မရှိ ရှိ
ရှမ်းပြည်နယ် မူဆယ်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၉ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C144 ၂၄ ကျား မရှိ ရှိ
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားပြည်သူ့​ဆေးရုံ မိုးညှင်းပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၂၄ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၁၁:၀၀) ၁၀ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C145 ၄၈ ကျား မရှိ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၇:၀၀) ၂၉ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C146 ၃၂ ကျား C139 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၂၆ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၇:၀၀) ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C147 ၄၃ ကျား C133၊134၊142
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၂၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၁၃ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C148 ၁၉ ကျား C148
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၂၈ ဧပြီ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀)
C149 ၁၅ ကျား C128
C150 ၁၈ မ မရှိ ရှိ
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးပြည်သူ့​ဆေးရုံ ဟားခါးပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၂၉ ဧပြီ ၂၀၂၀ (နံနက် ၇:၀၀) ၁၃ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C151 ၂၅ မ မရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ အင်းစိန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၁ ​မေ ၂၀၂၀ (နံနက် ၇:၀၀) ၁၆ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C152 ၃၂ မ ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၃ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀)
C153 ၁၉ မ ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၃ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၃၁ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C154 ၂၀ မ ရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၃ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၂၄ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C155 ၄၈ ကျား မရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ရန်ကုန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၃ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀)
C156 ၃၃ ကျား မရှိ မရှိ
မြန်မာ ​နေပြည်​တော် ပထစနယ်​မြေ အမှတ်၂တပ်မ​တော်​ဆေးရုံ ၄ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန် တပ်မ​​တော်သား
C157 ၂၃ မ C151 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ အင်းစိန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၄ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၁၉ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C158 ၂၄ မ C101၊C107 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၄ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀)
C159 ၂၇ မ C101၊C107 မရှိ
C160 ၂၀ မ C98 မရှိ
C161 ၆၂ ကျား မရှိ
C162 ၄၃ မ C151၊C152၊C153၊C154 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ အင်းစိန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၇ မေ ၂၀၂၀ (နံနက် ၇:၀၀)
C163 ၄၃ ကျား C155 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၇ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀)
C164 ၅၂ ကျား C155 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး​ ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၇ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၂၂ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C165 ၂၀ ကျား C152၊C153၊C154 မရှိ
C166 ၂၅ မ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး​ ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၇ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀)
C167 ၂၂ မ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး​ ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၇ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၂၂ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C168 ၂၂ မ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး​ ​တောင်ဥက္ကလာ​ဆေးရုံ ၇ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၂၉ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C169 ၁၂ မ
C170 ၂၈ မ
C171 ၂၉ မ
C172 ၂၂ ကျား
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး​ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၇ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၂၂ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C173 ၁၈ ကျား
C174 ၂၄ ကျား
C175 ၂၃ ကျား
C176 ၂၈ ကျား
C177 ၈၄ မ C151၊C152၊C153၊C154၊C162 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး​ အင်းစိန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၈ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၁၀:၀၀)
C178 ၄၉ မ C98 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး​ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၉ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၃၁ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C179 ၂၁ ကျား C177 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး​ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၀ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၂၃ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန်
C180 ၂၁ မ C86 မရှိ
C181 ၅၂ မ C179 မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး​ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၃ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀)
C182 ၃၂ ကျား မရှိ
ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးပြည်သူ့​ဆေးရုံ ထန်တလန်ပြည်သူ့​ဆေးရုံ ၁၆ ​မေ ၂၀၂၀ (နံနက် ၇:၀၀)
C183 ၅၇ ကျား မရှိ မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး​ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၃၁ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန် ​စောင့်ကြည့်လူနာ
C184 ၄၁ ကျား မရှိ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး​ ​ဝေဘာဂီအထူးကု​ဆေးရုံ ၁၇ ​မေ ၂၀၂၀ (ည ၈:၀၀) ၃၁ ​မေ ၂၀၂၀တွင် ပြန်လည်​ကောင်းမွန် ​
C185 ၄၆ ကျား မရှိ